Magungano Ekutanga eZvapupu zvaJehovha muMexico City
Nharireyomurindi—Yekudzidza | August 2017
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
INGUVA yekupera kwaNovember 1932 muMexico City. Vhiki yakapera muguta iri rine vanhu vanopfuura miriyoni uye rine chipatapata makaiswa marobhoti. Asi iye zvino nhau dzemarobhoti dzava munya. Vatori venhau vemuguta racho vava kutaura nezvechiitiko chevhiki rino. Vari pachiteshi chezvitima vaine makamera avo vachimirira kuti muenzi anokosha asvike. Muenzi uyu ndiJoseph F. Rutherford, uyo aiva purezidhendi weWatch Tower Society. Zvapupu zvemunyika macho zviripowo uye zvakagadzirira kuchingamidza Hama Rutherford, avo vari kuuya kuzopinda gungano remazuva matatu remunyika iyi.
“Hapana mubvunzo kuti gungano iri richaramba richiyeukwa sechiitiko chinokosha zvikuru pakuita kuti Chokwadi chifambire mberi muMexico,” yakadaro The Golden Age. Asi chii chakaita kuti gungano iri rakangopindwa nevanhu 150 chete rikoshe zvakadaro?
Gungano iroro risati raitwa, muMexico maingova nezvibereko zvishoma zveUmambo. Kubva muna 1919 magungano madiki aiitwa, asi nhamba yeungano yakadzikira mumakore akatevera. Kuvhurwa kwakaitwa hofisi yebazi muMexico City muna 1929 kwakaita kuti pave netariro yekuti ungano dzaizowedzera. Zvisinei, paiva nezvipingamupinyi. Mumwe mucolporteur paakaudzwa kuti arege kusanganisa zvebhizinesi nebasa rekuparidzira, akagumbuka chaizvo zvekuti akasiya sangano ndokutanga boka rake rekudzidza Bhaibheri. Panguva iyi mutariri webazi akaita zvinopesana neMagwaro uye aifanira kutsiviwa. Zvapupu zvakavimbika zvemuMexico zvaida kukurudzirwa.
Pavakanga vari munyika macho, Hama Rutherford vakakurudzira chaizvo hama idzi dzakatendeka pavakapa hurukuro mbiri pagungano uye shanu paredhiyo. Aka kaiva kekutanga kuti nhepfenyuro dzeredhiyo dzemuMexico dzitepfenyure mashoko akanaka munyika yacho yese. Pakapera gungano racho, mutariri webazi ainge achangogadzwa akaronga basa rekuparidza, uye Zvapupu zvaishingaira zvakawana simba ndokuenderera mberi nebasa zvichifarirwa naJehovha.
Gungano rakaitwa muMexico City muna 1941
Gore rakatevera, munyika macho makaitwa magungano maviri. Rimwe rakaitwa muguta reVeracruz uye rimwe muMexico City. Basa rakaoma raiitwa mundima rakatanga kuva nezvibereko zvakanaka. Muna 1931 paiva nevaparidzi 82. Papera makore 10 nhamba yacho yakawedzera zvakapetwa ka10. Vanhu vanenge 1 000 vakauya kuMexico City kuzopinda gungano rakaitwa muna 1941.
Muna 1943 Zvapupu zvakapfeka zvikwangwani zvekushambadza gungano raiva nemusoro unoti “Rudzi Rwakasununguka,” rakaitwa mumaguta 12 emuMexico. * Vaiisa chimwe kumberi chimwe kumusana zvosungwa netambo dzinopfuura nemumapendekete. Zvapupu zvakanga zvatanga kushandisa nzira iyi yekushambadza muna 1936.
Mufananidzo wakatorwa mune imwe magazini yemuna 1944 unoratidza hama dzichifamba dzakapfeka zvikwangwani muMexico City
Ichitaura nezvekubudirira kwekushambadza nezvikwangwani muMexico City, magazini inonzi La Nación yakati: “Pazuva rekutanga [regungano, Zvapupu] zvakaudzwa kuti zvikoke vamwe vanhu vakawanda. Zuva rakatevera racho vakanga vawanda zvekutadza kukwana mavaipindira.” Kushambadza uku hakuna kufadza chechi yeRoma, saka yakabva yatanga kupikisa Zvapupu. Pasinei nekupikiswa ikoko, hama nehanzvadzi dzakaramba dzichishambadza gungano racho dzisingatyi. La Nación yakataurawo kuti: “Guta rese rakavaona . . . varume nevakadzi vangori ‘zvikwangwani’ zvega zvega.” Nyaya yacho yaiva nemufananidzo wehama dziri mumigwagwa muMexico City. Pasi pemufananidzo wacho paiva nemashoko ekuti: “Kuzara mumigwagwa.”
“MIBHEDHA YACHO YAIVA NANI KUPFUURA KURARA PASI”
Mumakore iwayo, Zvapupu zvakawanda zvaizvipira chaizvo kuti zvikwanise kupinda magungano mashoma aiitwa muMexico. Vakawanda vaibva kumisha yekumaruwa yaiva kwayo yega, kwakanga kusingasviki zvitima uye kwaisava nemigwagwa. Imwe ungano yakanyora kuti: “Chinhu chega chinopfuura pedyo nenzvimbo ino itambo yetelegraph.” Saka vaya vaida kupinda gungano vaifanira kufamba nemanyurusi kana kuti netsoka kwemazuva kuti vasvike paikwirirwa chitima chaizovasvitsa muguta raiitirwa gungano.
Zvapupu zvakawanda zvaiva varombo, zvekuti zvaisava nyore kuti vawane mari yekungoti vasvike kwaiitirwa gungano. Pavaisvika, vakawanda vaigara mudzimba dzezvimwe Zvapupu. Vamwe vairara muDzimba dzeUmambo. Pane imwe nguva vanhu vanenge 90 vainge vauya kuzopinda gungano vakagara pabazi, vachirara “pamakatoni emabhuku ainge akarongwa semibhedha, zvekuti mubhedha mumwe nemumwe waiva nemakatoni 20.” Bhuku Regore rakati vaenzi ava vakati “mibhedha yacho yaiva nani kupfuura kurara pasi.”
Zvapupu izvozvo zvaionga chaizvo kuungana pamwe chete nehama nehanzvadzi dzavo zvekuti vaiona kuzvipira kwavaiita kuti vapinde magungano echiKristu kuri kushandira zviripo. Vaparidzi vanoda kusvika miriyoni vari muMexico mazuva ano, vanoongawo sezvaiita hama idzodzo. * Muna 1949 mushumo wakabva kuhofisi yebazi muMexico wakataura nezvehama idzi uchiti: “Kuoma kwezvinhu kwavanosangana nako hakusi kuvadzorera shure panyaya dzekunamata nemhaka yekuti patinoita gungano rimwe nerimwe vanoramba vachitaura nezvaro kwenguva yakareba uye mubvunzo wavanoramba vachibvunza ndewekuti, Tichava nerimwe gungano riini?” Izvozvo ndizvo zvichiri kuitika mazuva ano.—Kubva mudura renhoroondo yedu muCentral America.
^ ndima 9 Bhuku Regore ra1944 rakati gungano iri “rakaita kuti zvapupu zvaJehovha zvizivikanwe zvikuru muMexico.”
^ ndima 14 Vanhu 2 262 646 vakapinda chirangaridzo muMexico muna 2016.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Tichava Nerimwe Gungano Riini?”
Une Chido Chekumirira Nemwoyo Murefu Here?
“Rugare rwaMwari Runopfuura Kufunga Kwose”
NYAYA YEUPENYU Kutsungirira Matambudziko Kunounza Makomborero
Tinopfekenura Sei Unhu Hwekare Torega Kuhupfekazve?
Tinopfeka Sei Unhu Hutsva Torega Kuhupfekenura?
KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU “Tichava Nerimwe Gungano Riini?”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2017
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2017
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2017
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2017
“Hapana Nzira Isingafambiki Kana Yakarebesa”